I-Wax Melana nePainting apho amanzi kunye ne-Oyili ayifaki
Sebenzisa i-wax kunye namanzi awaxubeki kwiziphumo ezinkulu.
Inyaniso yokuba ioli okanye i-wax kunye namanzi ayixubeki ingasetyenziselwa xa ukudweba kwimibala yokugcina iindawo ezimhlophe ukugcina umhlophe wephepha okanye umbala phantsi, kunye nokudala imibala enomdla. Kulula nje, udweba nge-wax kwiphepha lakho, uze uhlambe phezu kwalo ngepende ephantsi kwamanzi. Apho i-wax ikhona, amanzi epayipi aphendululwa kwaye ngoko upende uyagxotha okanye uqokelele emancinci amancinci kuwo.
Yintoni eyahlukileyo phakathi kokusebenzisa umlingo wokulwisana kunye ne-masking flux?
Isiqhelo samanzi esiqhekezayo uyasicoca xa umzobo omile; I-wax ihlala ishiywe kwiphepha (ufumana kwakhona umququzeleli wokugcina umbane, owenzelwe ukushiywa kwiphepha). Ukukhwela kwamanzi i-block yebhlogi-xa usikhuphe umshiya unommandla oqinileyo wephepha elimhlophe-kanti nge-wax kuxhomekeke kwindlela oyisebenzisayo ngayo okanye ngokufanelekileyo.
Ziziphi iindidi ze-Wax ezinokusetyenziswa?
Naluphina, nangona iziphumo ziyahlukahluka ngokuxhomekeka kwindlela enamafutha okanye enokwakheka ngayo, indlela yokugcoba okanye ukucatshulwa iphepha elisebenzisayo, kunye nendlela odweba ngayo. Ifom ephantsi kakhulu ye-wax mhlawumbi ikhandlela elimhlophe. Iikhrayoni ezilandelayo ze-wax, i- oil pastels . Musa ukuzikhawulela kumakhrayoni emhlophe okanye ngekhandlela kuphela, khumbula ukuba i-wax ayikho umbala ophikisa amanzi. Yenza iimvavanyo kwiimakhishithi ezincinci uze ugcine irekhodi. Zama ngokutshiza okubanzi kwe-wax kwaye uhlaziye ingongoma yemigca eqondileyo.
Uncedo, andinakuyibona apho ndibeka khona umgca omhlophe
Ukuba ubamba iphepheni lakho kwiphepha, uya kukwazi ukubona i-wax ekhanya ekukhanyeni. Ukuqhelaniswa ngendlela osebenzisa ngayo umcingo omhlophe, usebenza ukusuka kwelinye icala lomdwebo ukuya kwelinye, kuya kukunceda ukhumbule apho ubeke khona.
Ngaba i-Wax ingabekwa phezu kwePaint?
Ewe, i-wax ingasetyenziselwa ukusifihla indawo yecwecwe kodwa kufuneka isetyenziswe kuphela xa ipende iyomile.
Ukuba kusekhona emanzi, i-wax ngeke 'ithathe'. Kwimimiselo emibini engezantsi, enye ngakwesobunxele yayifakwe kwi-wax kwipende eluhlaza okomhlaza kwaye yahlanjululwa nge-orange; kwelinye ngakwesokudla, i-wax yayisetyenziswe kwipende ebomvu eyomileyo, ngoko ukuhlamba okubomvu okunamandla kusetyenziswa phezulu. Kuzo zombini unokubona indlela umbala wangaphambili ubonisa ngayo lapho i-wax isetyenziswe ngayo nendlela ukuthungwa kwenziwe ngayo ukuqokelela ipeyin kumaconsi ambalwa kwi-wax.
Izitayela zoPawulo: i-Sfumato kunye neChiaroscuro
Umbala wokuxuba umbala: Ukuxuba omnyama
Iseluleko sokwakhiwa kweZindlu kubasetyhini: Ukusebenzisa isakhiwo sokwakhiwa kweZindlu ukuLahla iFat kunye neTone